Laasaros soo bax! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma taqaanaa sheekadii Ciise ku sara kiciyey Laasaros? Waxay ahayd mucjiso aad u weyn oo ina tuseysa in Ciise uu awood u leeyahay inuu inaga kiciyo kuwii dhintay. Laakiin sheeko badan ayaa jirta, oo Johannes wuxuu sheegayaa tafaasiil yar oo macno qoto dheer inoo leh maanta.
Aynu aragno sida Johannes u sheego sheekadan. Laasaros ma uusan deganeyn magaalada reer Yahuudiya - laakiin wuxuu ahaa walaalkii Maarta iyo Maryan, Maryan oo Ciise aad u jeclaaday ilaa ay cagihiisa ku dartay saliid saliid ah oo qaali ah. Gabdhihii way u waceen Ciise: "Sayidow, bal eeg kan aad jeceshahay waa bukaaye" (laga soo bilaabo Yooxanaa 11,1: 3). Aniga ahaan, tani waxay umuuqataa qaylada gargaarka, laakiin Ciise uma uusan imaan.
Miyaad mararka qaarkood dareentaa in Ilaah uu daahay jawaabtiisii? Xaqiiqdiina waxay ku dhacday Maryan iyo Maarta, laakiin daahitaanku micnaheedu maahan in Ciise uusan jeclayn, laakiin taa beddelkeeda uu qorshe kale maanka ku hayo maxaa yeelay wuxuu arki karaa wax aysan arki karin. Laakiin markii ay soo noqotay, Laasaros wuxuu dillaacay haddaba markuu u yimid Ciise, isagoo leh, Cudurkanu mid dhimasho kuma dhammaan doono. Ma khalad buu ahaa? Maya, maxaa yeelay Ciise wuxuu fiiriyay dhimashada ka dib oo kiiskan wuu ogaa in dhimashadu aysan noqon doonin dhamaadka sheekada, wuxuu ogaa in ujeedadu ahayd in lagu ammaano Ilaah iyo Wiilkiisa (Aayadda 4). Si kastaba ha noqotee, wuxuu xertiisii ​​ka dhigay inay ka fikiraan inuusan Laasaros dhiman doonin. Halkan waxaa sidoo kale cashar noogu ah annaga, maxaa yeelay had iyo jeer ma fahamno waxa Ciise runtii uu ka dhigan yahay.
Laba maalmood ka dib, Ciise xertiisii ​​wuu la yaabay kadib markii uu soo jeediyey inay Yahuudiya ku noqdaan. Ma aysan fahmin sababta Ciise u rabay inuu dib ugu laabto aaggii qatarta, sidaa darteed Ciise wuxuu ugu jawaabay faallo hal abuur leh oo ku saabsan ku socoshada iftiinka iyo bilawga mugdiga. Markaas wuxuu ku yidhi: Saaxiibkeen Laasaros waa hurdaa, laakiin waan toosi doonaa. (Aayadda 11).
Xertiisii ​​waxay u muuqdeen in loo isticmaalay dabeecadda qarsoodiga ah ee qaar ka mid ah faallooyinka Ciise oo waxay heleen meel ay ka baxaan si ay macluumaad dheeraad ah u helaan. Waxay tilmaameen in macnaha dhabta ahi macno lahayn. Hadduu hurdo, kaligiis ayuu toosi doonaa, marka maxaan ugu qasbanahay inaan nolosheena qatar galino halkaas?
Ciise wuxuu sharraxay: “Laasaros waa dhintay”, iyo weliba: “Waan ku faraxsanahay inaanan halkaas joogin”. Sabab? "Markaa waad rumaysan tahay". Ciisena wuxuu ku shaqeyn doonaa mucjiso ka yaab badan kan hadii uu ka hortagi lahaa oo kaliya dhimashada nin jiran. Mucjisada kaliya maahan in Laasaros dib u soo nooleeyo - waxay ahayd halkii Ciise ogaadey waxa ka dhacaya 30 kiilomitir ka fog iyaga iyo waxa ku dhici doona mustaqbalka dhow.
Wuxuu lahaa nal ay arki kari waayeen - oo kanu wuxuu u muujiyey dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa Yahuudiya. Isagu si buuxda ayuu gacanta ugu hayey dhacdooyinka. Wuu ka hortegi karayay qabashada hadii uu doonayo; wuu joojin lahaa tijaabada hal eray, laakiin ma uusan joojinin. Wuxuu go’aansaday inuu sameeyo wixii uu u yimid dhulka.
Ninkii dhintay kuwii dhintay wuxuu u diyaar u ahaa inuu naftiisa u bixiyo dadka maxaa yeelay wuxuu awood u lahaa dhimashada, xitaa dhimashadiisa. Wuxuu u yimid dunidan sidii nin dhimanaya si uu u dhinto, iyo wixii u ekaa musiibo ku saabsan indha indheynta dusha sare ayaa runtii ku dhacday badbaadadeenna. Ma doonayo inaan ku doodo in musiibo kasta oo dhacda ay dhab ahaantii tahay mid Ilaah qorsheysa ama wanaag ah, laakiin waxaan rumeysanahay in Eebbe awood u leeyahay inuu ka soo bixiyo waxa xun oo uu arko xaqiiqada aannan arki karin.
Wuxuu u muuqdaa mid dhaafsiisan dhimashada wuxuuna xukumaa dhacdooyinka maanta wax aan ka yarayn intaas ka dib - laakiin had iyo jeer waa mid anaga noo muuqan sida ay u arkeen xertii. Kaliya ma arki karno sawirka weyn marmarka qaarna waxaan ku dhacnaa mugdiga. Waa inaan aaminno Ilaah inuu wax u qabto sida ugu wanaagsan ee uu u fikiro.
Ciise iyo xertiisii ​​waxay tageen Beytaniya oo waxay ogaadeen in Laasaros afar maalmood xabaasha ku jiray. Khudbadihii duugta ayaa la sameeyay oo aaska aakhirkiina waa la soo afjaray - ugu dambayntiina dhakhtarkii wuu soo dhammaaday! Marta ayaa tidhi, waxaa laga yaabaa inay yaraato rajo yar oo xanuun leh: "Sayidow, halkaad joogi lahayd, walaalkay ma dhiman lahayn" (Aayadda 21). Waxaan kuu yeernay maalmo ka hor haddii aad timidna Laasaros weli waa sii noolaanayaa.
Aniguba sidoo kale waan niyad jabi lahaa - ama, si ku habboon, jahwareer, xanaaq, cabsi badan, quus - miyaanad ahayn? Muxuu Ciise ugu ogolaaday walaalkeed inuu dhinto? Sabab? Had iyo jeer waxaan isla weydiinaa isla su’aasha maanta - Muxuu Eebbe u daayay kuwa aan jeclahay inay dhintaan? Muxuu u oggolaaday tan ama masiibadaas? Hadey jawaabtu jirin, waxaan caro uga leexanay Ilaah. Laakiin Maria iyo Marta in kasta oo ay niyad jabeen, xanaaqeen, iyo in yar oo xanaaqsan, kama leexan. Maarta waxay lahayd rajo xoogaa - waxay eegtay wax yar oo iftiin leh: "Laakiin hadda waan ogahay: waxaad weydiisato Ilaah, Ilaah baa ku siin doona" (Aayadda 22). Laga yaabee inay ku fikirtay in weydiisashada sarakicidda ay noqon lahayd waxoogaa yara yaab badan, laakiin waxay soo jeedineysaa wax. Ciise iyo Masaar ayaa ku yidhi, Laasaros waa soo noolaanayaa, Waan ogahay inuu soo sara kici doono (laakiin waxaan rajeynayay waxyar ka hor). Ciise wuxuu yidhi, Tani waa wanaagsan tahay, laakiin ma ogtahay inaan ahay sarakicidda iyo nolosha? Hadaad i rumaysatid waligaa ma dhiman doontid. Ma u malaynaysaa sidaas? »
Marta ayaa markaa ku tidhi mid ka mid ah oraahyadii ugu caansanaa ee iimaanka ee Kitaabka Quduuska ah oo dhan: "Haa, waan rumeysanahay taas. Adigu waxaad tahay Wiilka Ilaah" (Aayadda 27).
Nolosha iyo sarakicidda waxaa laga heli karaa oo keliya Masiixa - laakiin miyaan rumeysan karnaa maanta wuxuu Ciise yiri? Waxaan runtii aaminsanahay "qof kasta oo halkaas ku nool oo aniga i rumeeyaana weligiis ma dhiman doono?" Waxaan jeclaan lahaa inaan dhammaanteen sifiican u fahamno tan, laakiin waxaan ogahay runtii in nolol cusub ay kasoo bixi doonto sarakicidda aan waligeed dhammaan doonin.
Kulligeen waxaan ku dhimanaynaa dunidan, sida Laasaros iyo Ciise, laakiin Ciise ayaa na sara kicin doona. Waan dhimannaa, laakiin annaga kanu ma aha dhammaadka sheekada, sidii ayuna ahayd dhammaadkii sheekada Laasaros. Marta waxay u tagtay inay Maryan iyo Maryan u timaado Ciise oo ooyaya. Ciise isaguna wuu ooyay. Muxuu u ooyay markuu ogaa inuu Laasaros mar kale noolaan doono? Muxuu John sidan u qorey markii Johannes ogaaday in farxaddu ku nooshahay "geeska agtiisa"? Ma aqaano - Had iyo goor ma aqaano sababta aan u ooyayo, xitaa munaasabadaha farxadda leh.
Laakiin waxaan u maleynayaa in bayaanka uu yahay in ay caadi tahay in lagu ooyo aaska, in kastoo aan ognahay in qofkaan loo kicin doono nolol aan dhiman. Ciise wuxuu ballanqaaday inaanan weligeen dhiman doonin, dhimashaduna weli jirto.
Dhimashadu wali waa cadow. Isagu weli waa wax adduunkan ku jira oo aan ahayn waxa ay weligeed ahaan doontaa. Mararka qaar waxaan la kulannaa waqtiyo murugo qoto dheer leh, xitaa haddii Ciise ina jecel yahay. Markaynu ooyaynno, Ciise wuu inalaa ooayaa. Wuxuu arki karaa murugadeena maanta, sida uu u arki karo farxadaha mustaqbalka.
Ciise wuxuu yidhi, Dhagaxa ka qaad, Maryanna waxay qabtay oo ku tidhi, Waa xumaatay, maxaa yeelay, isagu wuxuu dhintay afar maalmood.
Ma jiraan wax noloshaada ku dhuumaaleysanaya, oo ah wax aadan dooneynin inuu Ciise muujiyo "adoo ku tuuraya dhagaxa?"
Waxa jira wax sidan oo kale ah nolosha qof walba, wax aan jeclaan lahayn in aan qarsano. Mararka qaar Ciise wuxuu leeyahay qorshooyin kale maxaa yeelay wuxuu ogyahay waxyaabo aanan aqoon oo waxaan aaminsanahay oo keliya. Markaasay dhagaxii ka tuureen oo ciise ayaa baryay oo yidhi: Laasarosow, soo bax. Johannes ayaa warkiisa soo xigtay: - kii dhintayna wuu soo baxay, laakiin mayu sii dhiman. Waxaa loo xidhay sidii nin dhintay oo kale oo xariifnimo ah, laakiin wuu ka tegey. Ciisena wuxuu ku yidhi, Furi kara oo daaya. (Aayadaha 43-44).
Wicitaankii Ciise wuxuu sidoo kale u dhintay kuwa ruuxiga ah ee maanta qaar kamid ahna waxay maqlaan codkiisa wayna ka soo baxaan xabaalahooda. Waxay ka soo baxayaan ifafaalaha, ka soo biqid fikirka keli ahaaneed ee keentay dhimashada. Maxaad ubaahantahay Waxaad u baahan tahay qof kaa caawiya inaad iska dhigto xafidistaada si aad uga takhalusto qaababkii hore ee fikirka ahaa ee noo fududa. Taasi waa mid ka mid ah howlaha kaniisadda. Waxaan ka caawinaynaa dadka inay dhagaxaan dusha ka tuuraan, xiitaa haddii ay u eg tahay jir dil, oo waxaan ka caawinnaa dadka ka jawaabaya baaqa Ciise.
Ma dhageysataa baaqa Ciise ee ku aadan inuu isaga u yimaado? Waa waqtigii laga soo bixi lahaa "qabriga". Malaha waad ogtahay in qof Ciise wacaya? Waa waqtigii lagu caawin lahaa inuu dhagxaanta tuuro. Tani waa wax laga fikiro.